flash drive ကို - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: flash drive ကို
Tag Archives: flash drive ကို
ဝိန်း, NJ (ဇွန်လ 17, 2019) - JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ယနေ့ WFIE, Evansville, Ind အတွက်အား NBC Affiliate ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် (DMA #103), ၎င်း၏ ProHD စတူဒီယို 4000S တိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုနှင့် streaming များအသုံးပြုနေသည်။ ဝဘ်အဘို့ကိုချိုးဖောက်သတင်းနှင့်ဒေသခံအားကစားလွှမ်းခြုံထုတ်လုပ်ရန်စတူဒီယို။ Grey ကရုပ်မြင်သံကြား, ဘူတာရုံကပိုင်ဆိုင်မူလကပြီးခဲ့သည့်စနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူ ...
TAG VS ကြေညာချက်များစီမံကိန်းများကို IBC 9000 မှာသဲ MCM-2018U အိုင်ပီ-မြင်ကွင်းစုံများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
တစျခုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ uncompressed နှင့် Compressed နေရင်မြန်အောင်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု, အားလုံးအသံလွှင့်အတွက်တဲလ်အဗစ်, အစ္စရေး -TAG VS, အဆင့်မြင့် IP ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့် UHD မြင်ကွင်းစုံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထူးကု၎င်း၏တခုအဖြစ်ရန်အစီအစဉ်များကြေညာလိုက်ပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ Post ထုတ်လုပ်မှု Applications ကိုပွိုရုပ်ပုံအရည်အသွေးပေး IBC 9000 မှာ software ကိုသာ MCM-2018U အိုင်ပီ-မြင်ကွင်းစုံများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်၏ groundbreaking ။ ၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံး ...
IBC 2018 မှာ IP ကိုတိုးချဲ့ & မက်တရစ်ကိုကျော် Apantac မိတ်ဆက် KVM
Apantac, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့် Feature-rich မြင်ကွင်းစုံ, ဗီဒီယိုမြို့ရိုး, extension ကိုများနှင့်အချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်၏နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရှေ့ဆောင်က 2018.E8 ရပ်, IBC 37 မှာတခုအဖြစ်တံ့သော, IP ကို ​​Extender တွေနှင့်မက်တရစ်ကိုကျော် KVM ၎င်း၏လိုင်းချဲ့ထွင်။ ဤရွေ့ကားအသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်အလွန်နိမ့်အောင်းနေချိန်ကိုဆက်ကပ်။ IP ကိုသွယ်တန်း / လက်ခံထား (& Models: KVM-IP-TX / RX) ကျော်ဤဒုတိယမျိုးဆက် KVM ဖြစ်ပါတယ် ...
IBC2018 မှာ Sonnet Technologies က
Thunderbolt ™3ပြင်ပဂရစ်ဖစ် (eGPU) IBC2018, Sonnet မှာ Solutions ကြီးမားတဲ့အာဏာဆာလောင်မွတ်သိပ်ဂရပ်ဖစ် (GPU ကို) အတွက်အထူးဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့် GPU ကိုကဒ်တိုးချဲ့စနစ်က၎င်း၏အသစ်ဆုရ eGFX ခွဲထွက်™ Box ကို 650 တစ် Thunderbolt ™3တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ AMD Radeon ™ RX Vegas 64, Radeon Pro ကို WX 9100, 9100 SSG နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းNVIDIA®GeForce® GTX 10 စီးရီး-based ကတ်များအပါအဝင်ကတ်များ။ အဆိုပါ 650 မော်ဒယ် ...
Sonnet ရဲ့ 1TB Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကိုအခုတော့သင်္ဘော
Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2018 - Sonnet Technologies ကယနေ့၎င်း၏ရေပန်းစား Fusion ™ Thunderbolt ™ 1 PCIe® Flash ကို Drive ကိုယခုရေကြောင်းဖြစ်ပါသည်သစ် 3TB ဗားရှင်းကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ပြီး Thunderbolt3interface ကို, အMac®-နှင့်Windows®-သဟဇာတ drive ကိုအတူတစ်ဦးကကြမ်းတမ်း, အိတ်ကပ်-size ကို Solid-State Drive ကို (SSD) ကိုသိုလှောင်ရေးကိရိယာ NVMe flash ကိုသိုလှောင်မှု 1TB တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်များ၏ 40Gbps bandwidth ကို leverages ဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာ Sonnet Technologies က
NEW: အ3NAB ပြရန်မှာ Thunderbolt ™ 2018 ပြင်ပဂရစ်ဖစ် (eGPU) Solutions, Sonnet ကြီးမားသောများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့် eGPU PCI Express® (PCIe®) ကဒ်တိုးချဲ့စနစ်က၎င်း၏အသစ်အ eGFX ခွဲထွက်™ Box ကို 650 တစ် Thunderbolt ™3တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ AMD Radeon ™ RX Vegas 64, Radeon Pro ကို WX 9100, 9100 SSG နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအပါအဝင်, ပါဝါ-ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောဗီဒီယိုဂရပ်ဖစ် processing unit (GPU ကို) card ...
IBC မီဒီယာ Coverage ... သူတို့ကပဲရိုးသား, သင်အဘို့အလာမယ့်!
IBC ဖြစ်ကောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးကုန်သွယ်မှုပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုင်းအရွယ်အစားက M & E ကိုကုမ္ပဏီများထုတ်ကုန်အသစ်အယူအဆအသစ်တွေထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိရာအရပ်င်: ဒါဟာကြောင့်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါဟာဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအအကောင်းဆုံးအလားအလာစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုဆွဲဆောင်။ ဒါဟာက M & E ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မည်သူမဆိုဖြစ်ပါတယ်သူမည်သူမဆိုဖို့ရှိပါတယ်ကွောငျးတစျခုအဓိကဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် ...
အရေးပေါ်လိုအပ်နေ: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / စေတနာ့ဝန်ထမ်း (1-Day ကို5/ 20)
ရာထူး: အရေးတကြီးလိုအပ်: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / စေတနာ့ဝန်ထမ်း (1-Day ကို5/ 20) ကုမ္ပဏီ: BGCM အဝန်းနှင့် Sportsplex တည်နေရာ: မာလ်ဘိုရို NJ အမေရိကန်ကိုပိုမိုအတွေ့အကြုံကိုရရှိလိုပါသလား? စေတနာ့ဝန်ထမ်းနာရီရှာဖွေနေသို့မဟုတ်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းပြန်ပေးရမည်လော အခုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ ဒါဟာရေတိုချိုမြိန်လျက်, ဒေသခံပါပဲ။ ကျနော်တို့မာလ်ဘိုရို, NJ အတွက်မေလ 20th အပေါ်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကလူငယ် / မိသားစုအဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွမ်းကျင်သောဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ရှာကြသည်။ တစ်ခုရှိရမည် ...
IBC2016 မှာ Sonnet Technologies က
IBC2016 စက်တင်ဘာ 9-13 Sonnet Technologies ကရပ် 7.G02 အသစ်: Fusion (TM) Thunderbolt (TM)3PCIe (R) Flash ကို Drive ကိုဒီကြမ်းတမ်း, အိတ်ကပ်အရွယ် Solid-State Drive ကို (SSD) ကိုသိုလှောင်ရေးကိရိယာမှာဒေတာလွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်း 2,100 ကို MB / s ကိုကျော်၏အမြန်နှုန်းနှင့် flash ကိုသိုလှောင်မှု 512GB တပ်ဆင်ထားသည်။ the Fusion (TM) flash drive ကိုခရီးဆောင် SATA-based hard disk ကို drives တွေကို, SSD ကိုသိုလှောင်ရေးကိရိယာ, နှင့် USB တစ်ခု Ultra-အစာရှောင်ခြင်းအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ် ...
Sonnet Lightning-Fast Fusion Thunderbolt3PCIe (R) Flash ကို Drive ကိုမိတ်ဆက်
Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဧပြီလ 19, 2016 - Sonnet Technologies ကယနေ့က၎င်း၏အသစ်အ Fusion ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် (TM) Thunderbolt (TM)3PCIe (R) Flash ကို Drive ကို Windows အတွက် (R) Edition ကိုတစ်ဦးကြမ်းတမ်း, အိတ်ကပ်-size ကို Solid-State Drive ကို (SSD) ကို Thunderbolt3interface ကိုအတူသိုလှောင်ရေးကိရိယာ။ flash ကိုသိုလှောင်မှု 512GB တပ်ဆင်ထားခြင်း, Fusion Thunderbolt3PCIe Flash ကို Drive ကိုဒေတာ transfer အထိအမြန်နှုန်းကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Thunderbolt 40 ၏ 3Gbps bandwidth ကို leverages ...
JMR အီလက်ထရောနစ်အိတ်ဆောင် Thunderbolt SSD ကို Flash ကို Drive ကိုအထွေထွေရရှိနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
JMR ရဲ့အသစ်ခရီးဆောင်, Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း Thunderbolt2တပ်ဆင်ထား SSD ကို Flash ကို Drive ကို JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc ၏အရွယ်မှာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် System Integration တင်ပို့ဖို့ပထမဦးဆုံးအကြားယခုသီတင်းပတ်သူတို့ရဲ့သစ်ကို LightningTM LTNG-XTD ခရီးဆောင် ThunderboltTM SSD ကို Flash ကို၏အထွေထွေရရှိနိုင်ကြေညာခဲ့သည် Drive ကို။ Thunderbolt2interface ကိုအတူ ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း PCIe Flash ကို Drive ကိုအဘယ်သူမျှမပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်လိုအပ်မယ့်ခရီးဆောင်ဘတ်စ်ကား-powered drive ကိုဖြစ်ပြီး, ...
Sonnet အခုတော့သင်္ဘောကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးဘတ်စ်ကား-Power, Pocket သိုလှောင်ရေးကိရိယာ
Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ သြဂုတ်လ 11, 2015 - Sonnet ယနေ့က၎င်း၏အသစ်အ Fusion (TM) PCIe (R) Flash ကို Drive ကိုတစ်ဦးကြမ်းတမ်း, အိတ်ကပ်-size ကို Solid-State Drive ကို (SSD) ကိုသိုလှောင်ရေးကိရိယာ, ယခုရေကြောင်းနှင့်များအတွက်ရရှိနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ဝယ်ယူ။ Thunderbolt (TM)2ထုတ်ကုန်များ၏ Sonnet ရဲ့ကြီးထွားလာမိသားစုများ၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖွဲ့ဝင်ကို Fusion ခရီးဆောင် SATA-based hard disk ကို drives တွေကိုနှင့် SSD ကိုသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်တစ်ခု Ultra-အစာရှောင်ခြင်းအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ...
Sonnet Technologies က IBC2015 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
IBC2015 ကို Preview စက်တင်ဘာ 11-15 Sonnet Technologies ကပြင်သစ်ဘာသာပြန်ချက်မှ 7.G02 Link ကိုရပ်: ဂျာမန်ဘာသာပြန်ချက်မှ www.wallstcom.com/sonnet/IBC2015FR.htm Link ကို: www.wallstcom.com/sonnet/IBC2015GM.htm Link ကိုဂျပန်ဘာသာပြန်ချက်မှ: www.wallstcom.com/sonnet/IBC2015JP.pdf ကုမ္ပဏီခြုံငုံသုံးသပ်ချက်: Sonnet Technologies က Inc ကို Thunderbolt တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါသည် (TM) 2-to-PCIe (R) ကဒ်တိုးချဲ့စနစ်များ, လိုလားသူမီဒီယာစာဖတ်သူများ, RAID သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်သိုလှောင်မှု, အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်ထုတ်လွှင့်အတွက်လိုလားသူအသုံးပြုသူများအတွက်ကွန်ရက်နှင့်အခြားအင်တာဖေ့စကတ်များ ...